Labada Nooc ee Xirfadaha | CareerForce
Labada Nooc ee Xirfadaha
Xirfadaha farsamada iyo Xirfadaha Kumbuyuutarka
Qofkasta wuxuu awoodo rabaani ah uleeyahay meelo gaar ah. Waxaad kudhisaysaa xirfadahaaga tababar iyo khibrad kuwaasoo kor uqaadaaya awoodaada fulinta shaqada. Inaad awoodo aqoonsiga iyo qeexida xirfadahaagu waxay kuusahlaysaa inaad kajawaabto su'aalo dhawr ah markaad kujirto waraysiyada shaqada sida:
Maxaad uqaban kartaa ganacsigayga?
Caqabad noocee ah ayaad xalin kartaa?
Goobta shaqada, waxaa jiro labo nooc oo xirfado ah:
Labada nooc ee xirfaduhu waxay muhiim uyihiin guusha ganacsiga.
Awooda aad uleedahay inaad shaqo gaar ah si fiican uqabato sida cunto karinta, naqshadaynta kumbuyuutarka ama wax barista, ayaa ubaahan xirfad farsamo. Waxay quseeyaan shaqo gaar ah. Waxaad kabaran kartaa xirfado farsamo khibrad shaqo hore, dugsi ama tababar. Waxaad kuhormarin kartaa xirfadahaaga laqabsiga, waxbarasho iyo tababar. Xirfadahaan waxaa inta badan lagu daraa liiska shaqada si loo qeexo waajibaadka ugu muhiimsan ee shaqada. Tusaalayaasha ayaa ah:
Qor tirada kumbuyuutarka
Baar su'aal saynis ah
Ka iibi badeecooyin macaamiisha
Qor farqad qoraal ah
Awooda aad uledahay inaad dadka kale sifiican ula shaqayso aadna uga caawin karto ganacsigaaga inuu noqdo mid wax soosaar dheeri ah leh waxay ubaahan tahay xirfado fudud. Xirfadahaan ayaa ah kuwa aad muhiim u ah ilaa heer xirfadaha fudud ayaa sabab unoqdaan in batrooniyaashu go'aamiyaan inay shaqo siiyaan ama dalacsiiyaan shaqaale. Xirfadaha fudud qaarkood ayaa lagu baran karaa dugsiga. Laakiin inta badan xirfadaha fudud waxaad barataa maalin kasta noloshaada waxayna sii balaaran karaan xili kasta hadaad muhiimad siiso.
Uga qaybgal sida xubin koox kamid ah
Kudhiiri gali naftaada inaad gaarto yoolal
si fiican ula xariir dadka kale
Fikir hal abuur leh samee
Degdeg wax ubaro
Si wanaagsan ufakar
Badanaa waa wax fudud in la go'aansado heerka guusha qofka ayadoo laga fiirinaayo xirfadihiisa farsamada si kafudud sida lagu go'aansado aqoonta qofka ee xirfadaha fudud. Tusaale ahaan, waa wax fudud in la go'aansado in qaanad tahay mid afar gees ah oo iskudheeli tiran waayo taasi waa macluumaad yool leh; laakiin way adag tahay in la ogaado in qofku yahay isku xire caalami ah, sababtoo ah soosaarista xirfadaha caalamiga ah ma ahan kuwo sahlan.
Adeegso aaladeena Isku aadinta Xirfadaha
Diyaari jumlado adag oo xirfadaha ah
CareerForce waxay utaagan tahay inay taageerto guushaada